Na Njikọ nke Technology na Ọkwọ ụgbọala na-adọkpụ
Onye na-akwọ ụgbọala na-apụnara mmadụ ihe nwere ike ịmalite ịmalite ịchọta ọha na eze n'ime iri afọ ole na ole gara aga, mana nsogbu ahụ agbanyewo maka akụkọ ihe mere eme nke ụgbọala. Ụfọdụ n'ime ihe mgbagwoju anya kachasị anyị na-eche ihu taa na-abịa n'ụdị teknụzụ dị ka ekwe ntị na ihe eji eme ihe na-adịghị mma na nke telematics. N'ezie, ụfọdụ ndị nne na nna na-echegbu onwe ha banyere ụdị nsogbu ndị a na ha na- etinye ngwa ngwa ịkwọ ụgbọala na igwe ụmụaka ha iji belata ụgbọala na-adọpụ uche .
Na akụkọ ihe mere eme, ndị mmadụ niile rụghachiri azụ mgbe radios nke ụgbọ ala ghọrọ ihe, na ihe ndị ọzọ na-adọpụ uche-ma n'ime ma n'èzí ụgbọala gị-enweghị ihe ọ bụla metụtara nkà na ụzụ. Ọbụna mgbe nkà na ụzụ gụnyere, ọ bụghị mgbe nile ka onye ọjọọ ahụ nọ n'ọnọdụ. N'ezie, ihe ọ bụla na-eme n'oge na-adịbeghị anya na usoro nke usoro ihe enyemaka nke ndị ọhụụ nwere ike inyere aka belata ụgbọala na-adọpụ uche. Ọnọdụ a dị oke mgbagwoju anya, ma site na ngụkọta nke agụmakwụkwọ na teknụzụ ndị dị mma , ọ ga-ekwe omume ịlanarị njikọ nke nkà na ụzụ ma dọpụ ụgbọala.
Kedu ihe na-eduga na nkwọ ụgbọala?
Ịkwọ ụgbọala aghọwo ọrụ dị egwu nke na ọ dị mfe ichefu na ị na-achịkarị ton ma ọ bụ karịa nke na-atụgharị ígwè mgbe ọ bụla ị nọ n'okporo ụzọ. Ịtụle ọnụọgụ nke ụgbọ ala nwere ike ime-ma onye ọkwọ ụgbọala na onye ọ bụla na-adịghị mma-na-anya ụgbọala bụ ọrụ dị egwu, mana ọtụtụ n'ime anyị achụpụwo ọtụtụ ugboro, ma na-achụgharị ọtụtụ mgbe, na anyị ga-akwụsị ụdị ihe a na autopilot. Ọ dị nnọọ mfe ichefu na ọkwọ ụgbọala ahụ dị ezigbo mkpa na-etinye ọtụtụ ntinye uche, na e nwere ọtụtụ ihe ma n'ime ụgbọala anyị nke nwere ike ịmepụta ihe ndọpụ uche.
Nke kachasị mkpa, ịdọpụ ụgbọala na-adọkpụ bụ ala nke na-arụ ọrụ ụgbọ ala na-enweghị pasent 100 nke itinye uche gị n'ọrụ ahụ. Kama ịkwọ ụgbọala, na ịṅa ntị n'okporo ụzọ, onye ọkwọ ụgbọala dọpụrụ uche na-arụ ọrụ abụọ ma ọ̄ bụ karịa, nke gụnyere ịkwọ ụgbọala na ihe ndọpụ dịka ịrụ ọrụ redio, ịgwa onye njem, ịdọ ụmụaka aka ná ntị, ma ọ bụ ọbụna nchịkọta ka ha na-agafe ihe mberede. Ebe ọ bụ na ihe ndị a na-achọ ma ọ dịkarịa ala akụkụ nke onye ọkwọ ụgbọala ahụ, ha nile na-akpata ọnọdụ dị ize ndụ nye onye ọ bụla metụtara.
Gịnị mere ịkwọ ụgbọala na-ewepụ ji bụrụ nsogbu?
A na-ejikọ ụgbọ ala dị iche iche na ihe dị iche iche nke ihe ize ndụ, mana ọkwa ọ bụla nwere ike ịdị ize ndụ. Ihe ụfọdụ na-akpata ụta nke ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ihe mberede niile otu onye na-adọpụ ụgbọala ma ọ bụ ihe ọ bụla, na ihe dị ka pasent 16 nke ihe mberede ọ bụla na-emetụta ụgbọala dị ka ihe na-akpata ya. Ihe dị njọ karịa ụfọdụ akụkụ nke ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya, na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala n'ime ihe karịrị ọkara nke ihe ọghọm niile nke gụnyere ọkwọ ụgbọala na-eto eto dịka AAA Foundation.
Ọ bụ ezie na ụgbọala na-adọpụ uche na-abụkarị nsogbu, n'otu larịị ma ọ bụ ọzọ, ndị ọkwọ ụgbọala nwere ọtụtụ ihe nkedo iji mesoo taa karịa n'oge ọ bụla ọzọ n'akụkọ ihe mere eme. Ihe ndozi, dị ka iri nri, ịkpụcha ntutu, ịme ihe ngosi, ma ọ bụ ọbụna na-agwa ndị njem, adịla adị, ma nhọrọ ntụrụndụ dịka ihe nkiri DVD na-akwọ ụgbọala , ngwaọrụ nkwukọrịta dị ka ekwe ntị, na usoro ihe nkwụsị nke finelyy adịghị adị n'ime afọ ole na ole gara aga , na ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị kacha njọ na-emejọ na usoro nke distractions. Dị ka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ekwu okwu na ekwentị ma na-agwa onye njem njem na-adọpụ uche ya, inwe njem n'ime ụgbọ ala ahụ pụtara anya ọzọ nke na-achọpụta ihe ize ndụ, nke na-egbochi mmetụta dị ize ndụ nke ịkwọ ụgbọala na-adọpụ uche gaa n'ọtụtụ ụfọdụ.
Kedu ka Ntanetị nwere ike isi mee ka ịkwọ ụgbọala na-ewepụ?
Ngwukọrịta na-abụkarị nsogbu mgbe ọ na-abịa na-adọpụ uche anyị n'okporo ụzọ, ma ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe na-agbalị ịmepụta ụzọ maka teknụzụ iji mebie mmetụta nke ịkwọ ụgbọala na-adọpụ uche. Dị ka ọmụmaatụ, ijikọ ekwentị maka oku emetụaka na-ekwukarị na ọ dị nchebe karịa ịkpọ oku ụzọ ochie - ọ bụ ezie na ikwu okwu na ekwentị ka bụ ihe ndọpụ, ma ị na-eme ya.
E mepụtara teknụzụ ndị ọzọ iji kụọ tupu onye ọkwọ ụgbọala na-enweghị nchekasị nwere ike ịkpata ihe mberede. Ọtụtụ n'ime usoro ndị a adịlarị n'okporo ụzọ dịka nhazi njikwa ụgbọ mmiri na-emegharị , mgbochi aka , usoro ịdọ aka ná ntị na-apụ apụ , na teknụzụ ndị yiri ya. Ọ bụ ezie na usoro ndị a nile na-eji usoro dịgasị iche iche rụọ ọrụ pụrụ iche, echiche bụ isi bụ na ha nyochaa mmegharị nke ụgbọala ma rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na achọpụta ọnọdụ dị ize ndụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na usoro ịdọ aka ná ntị na-apụ apụ na-achọpụta na ụgbọ ala na-achọ ịgbapụ na ya, ọ nwere ike ịdọrọ mkpu ma ọ bụ ọbụna na-eme ihe nkedo nduzi, ebe ijikwa ụgbọ okporo ígwè nwere ike igbochi ọkwọ ụgbọala na-enweghị ncheta na ọdụdụ, gbochie njedebe azụ azụ.
Enweghi ike ikuku na uzu ikuku efu?
Ụfọdụ teknụzụ nchebe bụ ndị na-azọpụta ndụ, dịka eriri oche , na ndị ọzọ, dị ka airbags , dị oke mkpa, na obere oghere dị mkpa. Teknụzụ ndị ọzọ, dịka ndị ahụ edepụtara na ngalaba nke mbụ, ezutewo mmetụta dị iche iche site n'ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mfe ịhụ otú ọ dị mma, onye ọkwọ ụgbọala nwere akọ na uche nwere ike iwe iwe n'ụzọ usoro nchịkwa ụgbọ mmiri na-agba mbọ 'ijide onwe gị,' kama ịnọdụ ala na ịnyagharị. Onye ọ bụla na-eme ka teknụzụ ndị a dị n 'ụzọ nke aka ha, ọ bụ ezie na a ka na-arụ ọrụ nke usoro ọ bụla-na ọ ka na-enwe ọganihu-ọ na-esi ike ikwu otu ụzọ ma ọ bụ onye ọzọ nke ziri ezi. Ma, ụfọdụ ihe ndị a na-akpọ teknụzụ nchebe nwere ike ịgabiga oke?
N'ịchọ igbochi ihe mberede nke nwere ike ịdakwasị dị ka omume na-adọrọ adọrọ dị ka ụgbọala na-ewepụ ụgbọala na ụzọ ọnụma, ụgbọala gị nwere ike 'ịgụ' ọnọdụ obi gị ma ọ bụ ọkwa nke ntị gị otu ụbọchị. Otu ihe atụ dị otú ahụ bụ usoro nke ga- achọ isi gị ka ọ daa, na-egosi ọnọdụ ụra , nke nwere ike ịmepụta mkpuchi na ị ga-enwe ike ịkwụsị site na ịmalite, ịpụ n'ụgbọala gị, na ịgagharị maka nkeji ole na ole iji teta. Ihe atụ ọzọ bụ usoro nke ga-agụnye okwu ọnụ iji chọpụta ọnọdụ obi gị. Ụdị usoro a nwere ike ịmalite ime ihe iji gbochie ihe mgbochi nke ọnụma okporo ụzọ.
Ụdị usoro ndị a nwere ike ịdị mma na tiori-karịsịa mgbe a manyere ha na ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ -mana ha na-ajụkwa ajụjụ banyere oke njikwa anyị dị njikere ịkwụsị mgbe anyị na-agbada n'azụ ụkwụ. Ọ bụrụ na enwerela gị ọnụma n'ụzọ, ị nwere ike iche na obi ruru gị ala na ị maara na ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ na-ejiri usoro ndị e mere iji gbochie ha ka ha ghara ịmịpụ, na-egbutu gị, ma ọ bụ na-achọgharị gị. Ma rue mgbe ọ gwụla ma teknụzụ ndị a ga-adị ka ọkọlọtọ, lee ka ọ ga-esi bụrụ na onye ọkwọ ụgbọala na-adịghị ize ndụ, ma ọ bụ onye nwere ike ịdaba n'okporo ụzọ, ga-achọ ụgbọ ala ọhụrụ nke nwere ike ịgụ ọnọdụ obi ya ma belata ya na njem ahụ?
A Na-eme Ka Batrị Kaadị Nwụ
Mgbaba ụgbọala na-akpaghị aka
Ndi Inwe Uzo Ochie Na I Ga - enwe A Nche System?
Ịhọrọ ụgbọala agafe Starter
Kasị Mma Akụrụngwa Akụrụngwa Bluetooth na Atụmatụ
Car Audio DAC: Site na Analog ka Digital na Back
Njikwa Audio na-ebugharị na-agagharị agagharị na Stereo Car Stereo
Ịghọta Ndapụta Nhọrọ ndị ọzọ
Gịnị Bụ 'WRT'? Kedu ihe WRT pụtara?
Kedu ihe bụ Universal Plug And Play (UPnP)?
Otu esi eziga foto site na Email na Windows Live Mail
Esi mee Gmail IMAP ngwa ngwa na obere Email okporo ụzọ
Ntuziaka iji mepụta ngwa ngwa maka azụmahịa gị
Otu esi eji Apple TV Siri Remote
Otu esi wepu ihe ojoo na Yahoo Mail
MLB 14 Gosi Gosi PS3
Gbanyụọ SPOD - Otu esi edozi ọnyá ọnwụ nke Spinning
Trade Bitcoin, Litecoin, & Ether maka Altcoins na Shapeshift
Mee Ka Ojiji Kasị Mma
Kpọọ nke Ọrụ Ụwa na Agha PC patch 1.3
Ntugharị SQL Server
Kedu ihe bụ Black Friday?
Esi eweputa ihuenyo na Excel
Otu esi tinye ihe di egwu iji tinye na Photoshop
Esi edozi ihe eziomume 403
Premiere Pro CS6 Nkuzi - Isetịpụ Achọpụta Mgbanwe
Esi esi na weebụsaịtị